पत्नीले नै अक्षयको फिल्म नहेर्ने !
एजेन्सी– बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको लिड रोल रहेको फिल्म हाउफुल ४ दीपावलीको अवसरमा रिलिज भयो । फिल्मले बक्स अफिसमा पनि राम्रो गर्यो । यो फिल्मले अहिलेसम्म सय करोड भारतीय रुपैयाँ कमाइसकेको छ । यसलाई अक्षयको हिट फिल्ममा पनि गनिएको छ ।
यसको अर्थ हो, यो फिल्म दर्शकले मन पराएका छन् ।
विडम्बना ! यही फिल्म अक्षयकी पत्नी अर्थात् बलिउड अभिनेत्री ट्विंकल खन्नाले चाहिँ नहेर्ने बताएकी छिन् । अक्षय कुमारले नै यो कुराको खुलासा गरेका हुन् । उनले बिबिसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै ट्विंकललाई यस्ता खाले फिल्म मनै नपर्ने भएकाले उनले नहेर्ने बताएका छन् ।